‘रुद्र’ र ‘रुद्रप्रिया’: उर्फ मलजल गरिएको सम्वन्ध !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । पछिल्लो अभिनेत्री रेखा थापा र अभिनेता निखिल उप्रेतीको सम्वन्ध राम्रो छैन, भन्ने कुरा सबैलाई लागेको थियो । तर, मिडियालाई थाहै नदिई यी दुईले आफ्नो सम्वन्धलाई
पत्रकार धम्क्याउने सुस्मितालाई चलचित्र पत्रकार संघद्वारा वहिष्कार गर्ने चेतावनी !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । सिने पत्रकार उत्सब रसाईली (रमाइलो छ) र स्वस्तिका चिलुवाल (फिल्मीजूम)लाई सामजिक संजाल र टेलिफोनबाट गालीगलौज गर्दै कुटपिट गर्ने धम्की दिएकी अभिनेत्री/निर्मात्री सुस्मिता केसी प्रति चलचित्र
‘सुनिल रावल काण्ड’: समाप्ति या मध्यान्तर ?
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । सुनिल रावल नाम पछिल्लो दुई साताका लागि सिने क्षेत्रमा सर्वाधिक लिईएको नाम हो । असार ३० गते प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘सायद २’ असफल भएपछी निर्माता
आशिष ओली (गणेश), काठमाडौँ । सुदर्शन थापा निर्देशित सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ अहिले देशभर उत्साहजनक व्यापारका साथ प्रदर्शन भैरहेको छ । यो सिनेमामा पल शाह र पुजा शर्माको मुख्य
सुदर्शनसँग काम गर्दा सहजता हुन्छ: पुजा शर्मा
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । अभिनेत्री पुजा शर्मा नेपाली सिने क्षेत्रका लागि चर्चित र आशालाग्दी सदस्य हुन् । संचारकर्मी, मोडलिङ हुँदै सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी पुजा यो मितिसम्म आईपुग्दा धेरै
‘प्रेमगीत २’को ट्रेलर सेयर गर्दै सुदर्शनले दिए शुभकामना !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । दुई बर्ष अगाडी प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘प्रेमगीत’मा सुदर्शन थापाको निर्देशन र सन्तोष सेनको लगानी थियो । सांगीतिक प्रेमकथामा निर्माण भएको सिनेमाले निर्माता सन्तोष सेन, कलाकार
एनएफडिसी २०७३: विपिन, प्रियंका र ‘छक्का पन्जा’ उत्कृष्ट !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । ‘एनएफडिसी’ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको पाँचौ संस्करण सम्पन्न भएको छ । राजधानीको पाँचतारे होटेलमा सम्पन्न अवार्डमा दश विधामा मनोनित सिनेमा ‘पुरानो डुंगा’ले सर्वाधिक पाँच विधामा कब्जा
आशिष ओली ‘गणेश’, काठमाडौँ । ‘होस्टेल रिटर्न्स’बाट नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा इन्ट्री गरेका सुशील श्रेष्ठ पछिल्लो समयका आशा गर्न लायक कलाकार हुन् । मिलेको हाइट र सुगठिलो शरीरका धनि सुशीललाई स्थापित
लोक शब्द/संगीत कथाको माग कि बजारको ?
गणेश वली (आशिष), काठमाडौँ । बलिउड सिनेमा क्षेत्र संगीतका लागी प्रख्यात छ । त्यहाँ सिनेमामा संगीत समावेश गर्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ । कथाले माग गरे या नगरे पनी बलिउडमा संगीतलाई प्रथामिकता
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । नेपाली सिने नगरीमा बारम्बार ‘बक्स अफिस’ सिस्टमका बहसहरु भैरहन्छन । ‘बक्स अफिस’ सिस्टममा कुरा बेला बखतमा सडक, गल्ली र टोलमा गुन्जिने मौका पाईरहेको हुन्छन् । विगतका समयमा